I-Arrows iphucwe amaphuzu ngomzuzu wokugcina ibhekene neZinyoni - Impempe
I-Arrows iphucwe amaphuzu ngomzuzu wokugcina ibhekene neZinyoni
UVelemseni Ndwandwe weGolden Arrows noKagiso Malinga weSwallows FC
ILamontville Golden Arrows ilahle ithuba lokuvala igebe libe yiphuzu elilodwa phakathi kwayo neMamelodi Sundowns esicongweni se-log yeDStv Premiership ngemuva kokubambana neSwallows FC ngo 1-1 eDobsonville Stadium, eSoweto, ngoMgqibelo ntambama.
Ukudlala ngokulingana kwaBafana Bes’thende kwenze baba namaphuzu angu-37 kanti amaBrazilians anamaphuzu angu-40 endaweni yokuqala. Nokho umehluko okhona phakathi kwala maqembu ukuthi i-Arrows seyidlale imidlalo engu-21 kanti ngakolunye uhlangothi iSundowns isadlale imidlalo engu-18. Lokhu kwenziwa ukuthi amaBrazilians abuye ayibambe kwiCAF Champions League lapho esedlulele khona emidlalweni yama-quarterfinal.
Ngesiwombe sokuqala iqembu elilahle amathuba okushaya amagoli kakhulu yiSwallows. IZinyoni beziwenza amathuba nokucaciswe ukuthi kuyiwe ekhefini zinamakhona ayisithupha, i-Arrows inamabili kuphela. Ithuba elingcono kunawo wonke lehlele uZephaniah Mbokoma ngomzuzu ka-24, ngemuva kokuthi abadlali basemuva be-Arrows benze iphutha. Nokho uSifiso Mlungwana ulivimbile ibhola.
Ngasohlangothini lwe-Arrows ibizama ukufika emapalini eZinyoni ikakhulukazi uma zenze iphutha lokuyiyeka iphathaselene ibhola ngendlela ejwayele ngayo. Kodwa Abafana Bes’thende kuze kwaphela isiwombe sokuqala lingekho nelilodwa ibhola elivinjwe uVirgil Vries sekuvalwe amehlo emapalini eZinyoni.
Ngaphambi kokuthi ziye ekhefini i-Arrows iphoqeleke ukufaka uKnox Mutizwa endaweni kaMichael Gumede, ophume eselimele. ISwallows yona iqale isiwombe sesibili ngokufaka uMaphoko Seabi endaweni kaMoikhomotsi Thibedi.
Iphinde yasinda emlonyeni wengwenya i-Arrows ngomzuzu ka-52 ngesikhathi ibhola ebelingqofwe uKagiso Malinga, eyedwa, liphuma eceleni kwepali. Ngendlela ebidlala ngayo iSwallows bekubukeka kuyiyona ezoshaya igoli kuqala kulo mdlalo. Nokho kuvele kwenzeka obekungalindelekile ngesikhathi uSeth Parusnath eshaya igoli ngomzuzu ka-71 ngemuva kokuthola iphasi emnandi eshaywe uMutizwa phakathi ebhokisini.
ISwallows ibiqala ngqa ukuzithola ilandela ngemuva idlalela ekhaya selokhu kuqale isizini ka-2020/2021. Bekubukeka sengathi sekuphelile ngeZinyoni ngesikhathi ukaputeni wosuku uVuyo Mere eshaya igoli lokulinganisa ngomzuzu wokugcina ngci, kwemine ebingezwe unompempe. Kuphele kanjalo ngokubuya namaphuzu aphelele ekuhambeni kwi-Arrows
Previous Previous post: Inkakha yekhilikithi uTendulkar ingeniswe esibhedlela ngenxa ye-coronavirus
Next Next post: Bayivove inkani iRichards Bay eKapa, yabuya ishwiba izandla